Bugharịa iPhoto Library: Olee otú Bugharịa iPhoto Library ka a New ebe / Computer
iPhoto bụ akụkụ nke iLife software ngwa Suite, nke ọ bụghị nanị na-enyere gị hazie ma dezie foto gị, ma na-ahapụ gị enweta ihe ndị a na photos site na-eme foto akwụkwọ, kaadị ekele na slideshows. iPhoto uche site na a iPhoto Library nchekwa ma ọ bụ ngwugwu na e dere imported photos na ihe ọ bụla albums ị na kwukwara na iji iPhoto.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkwaga iPhoto Library ọhụrụ ebe ma ọ bụ ọhụrụ kọmputa, ị ga-akpali dum iPhoto Library nchekwa ma ọ bụ ngwugwu na mgbe ahụ mata ya ọhụrụ ebe ke iPhoto.
Ugbu a ị chọrọ ịkwaga iPhoto Library ọhụrụ ebe ke esịtidem mbanye nke Mac kọmputa (hoo haa, m amaghị ihe mere, ma eleghị anya nnọọ na ị chọrọ). N'ọnọdụ ndị ọzọ na-agụnye na ị na-agba ọsọ nke siri ike mbanye ohere na Mac (Mountain odum gụnyere) ruru akwa mkpebi photos e site igwefoto, ma ọ bụ na ị dị nnọọ zụtara a ọhụrụ Mac kọmputa (Mac OS X 10,11 gụnyere). Ọfọn, hụ otú ịkwaga iPhoto Library ọhụrụ ebe ma ọ bụ ọhụrụ gị na kọmputa (iji mpụga ike mbanye). Ihe ngwọta bụ yiri nnọọ.
1. Ụzọ ọpụpụ iPhoto ma ọ bụrụ na-emeghe.
2. Gwa y'otú Pictures na nchekwa ma họrọ iPhoto Library.
3a.For a ọhụrụ ọnọdụ: ịdọrọ iPhoto Library nchekwa ma ọ bụ ngwugwu ya ọhụrụ ọnọdụ.
3b.For a ọhụrụ kọmputa: Jikọọ mpụga ike mbanye nke ga na-egosipụta na Finder. Ịdọrọ iPhoto Library nchekwa ma ọ bụ ngwugwu mpụga ike mbanye.
4. Ugbu a na-emeghe iPhoto (ọhụrụ kọmputa na-akpụ akpụ iPhoto Library ọhụrụ kọmputa). Jituo Option isi na keyboard, na na-na Option isi ẹkenịmde ala ruo mgbe ị na-kpaliri ike ma ọ bụ na-ahọrọ ihe iPhoto n'ọbá akwụkwọ.
5. Pịa Họrọ Library.
6. Ịchọta na họrọ iPhoto Library-akpali gị ụkwụ na ụkwụ 3.
7. Ugbu a ị ga-ahụ foto na ọhụrụ iPhoto Library ma ọ bụ na a ọhụrụ kọmputa iPhoto Library.
8. Hichapụ mbụ iPhoto Library ọ dị mkpa.
9. N'ịga iPhoto Library zuru ezu.
Rịba ama: Ọ bụrụ na ihichapụ ochie n'ọbá akwụkwọ site na kọmputa si ike mbanye-eme ka ị ụjọ, ị nwere ike ndabere iPhoto ka CD / DVD site na ịpị Share Ọkụ n'ihu gị ihichapu ihe ọ bụla.
Ihe banyere N'ịga iPhoto Library:
1. The iPhoto n'ọbá akwụkwọ thumbnail bụ dị iche iche n'etiti tupu iPhoto '08 na post-iPhoto '08. The iPhoto ọbá akwụkwọ iPhoto '08 ma ọ bụ mgbe e mesịrị na-akpọ a ngwugwu. Hụ okpuru:
2. Ị nwekwara ike ịkpali iPhoto n'ọbá akwụkwọ na mpụga ike mbanye maka nkwado ndabere na mpaghara nzube.
3. Paghaa, ihichapụ, nyegharịa, ma ọ bụ ịgbanwe faịlụ ma ọ bụ nchekwa na iPhoto Library nchekwa pụrụ ime ka ị na-enweghị ike ịhụ gị foto. Iji slove nsogbu a, ị nwere ike iweghachi gị iPhoto n'ọbá akwụkwọ ndabere (ma ọ bụrụ dị), ma ọ bụ ịgbanwe ya azụ ka mbụ otu.
4.There nwekwara ngwa aka ị na-akpali iPhoto Library n'enweghị, dị ka iPhotoLibraryManager ma ọ bụ iPhotoBuddy.
> Resource> Nyefee> Olee otú iji Bugharịa iPhoto Library ka a New ebe / Computer